Xilliga uu Guardiola ku soo celin doono Camp Nou, caqabadda Xavi ka hortaagan Barcelona iyo Laporta oo caddeeyay qorshihiisa u tartamidda madaxweynaha Barca – Gool FM
(Barcelona) 12 Maaajo 2020. Joan Laporta ayaa markii ugu horreysay qiray inuu u taagan yahay u tartamidda xilka madaxweyne ee kooxda Barcelona, taasoo ku asteysan inay dhacdo sanadka 2021.
Laporta oo ahaa madaxweynaha Barca intii u dhexeysay 2003 illaa 2010, waxaana uu hadda diyaar u yahay ku soo laabashada kursiga loogaga arrimiyo kooxda reer Spain.
“Waa xaalad mudan in laga fikiro, waxaanna ka shaqeyneynaa sidii aan wax walba isugu aaddin lahayn,” ayuu Laporta u sheegay barnaamijka ka baxa TV3 ee Tot es Mou.
“Aad ayaan u xiiseynayaa, kal hore madaxweyne waan u soo noqday, waxaana rajeynayaa inaan mar kale u shaqeeyo kooxda Barcelona” ayuu hadalkiisa ku daray 57-jirkan.
Waxa uu Laporta carrabka ku dhuftay rabitaankiisa ku aaddan habka ay kooxda u shaqeyso, maadaama sawirka ka muuqday sanadihii ugu dambeeyay aysan ahayn wixii ay kooxda dooneysay.
Isbaanishkan ayaa dhanka kale qiray inuu jeclaan lahaa in mar kale uu Pep Guardiola hoggaamiyo safka kooxda Barcelona xilli kalkii hore ee isaga magacaabay.
“Waan jeclaan lahaa inuu Guardiola soo laabto, balse hadda waxa uu ka tirsan yahay City, waana go’aan ay tahay inuu isaga qaato. Waa mid muhiim ah Barcelona iyo dhammaan dadka reer Catalonia, waxaann la hadli doonna qofka mudan inuu noqdo macallinka Barcelona kaddib doorashada 2021” ayuu yiri Laporta.
Geesta kale, ciyaaryahankii hore ee Blaugrana Xavi Hernandez ayaa lala xiriiriyay shaqada macallinnimo ee kooxda Barca kaddib markii la ceyriyay macallinkii fashilmay ee Ernesto Valverde, waxaana la rumeysan yahay in Xavi uu xilli uun soo istaagi doono diillinta macallimiinta ee garoonka Camp Nou.
Isagoo arrintaasi ka hadlaya, waxa uu madaxweynihii hore ee Barcelona ifiyay in ciyaartoydii ay isla ciyaareen qaar badan ay ka joogaan, sidaas darteedna ay adkaan doonta inuu maamulo.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu Laporta ku ammaanay halyega qaranka Spain inuu leeyahay xirfadda macallinnimo, sidoo kalena uu yahay shaqsi daacad ah, sidaas darteedna uu mar uun go’aansan doono ku soo laabashada Camp Nou.